FOI: Shiinaha waxuu aad u iibsanayaa shirkaddaha Sweden - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Erik Simander/TT, Gorm Kallestad/TT, Joakim Ståhl/TT.
La daabacay fredag 29 november 2019 kl 15.53
Baaritaan cusub oo uu sammeeyay machadka baarista difaaca dhammeystiran ee FOI ayaa muujinaya in ay sii kordhayaan shirkadaha Swedish ka ee ay iibsaynayaan maalgeliyayaal u dhashay dalka Shiinaha.
Qaar badan oo shirkadahan ka mid ah ayaa waxay qabtaan howlo dowladda Shiinuhu ay aad u xiiseeneyso.
Jerker Hellström waa baare sare oo xagga siyaasadda amniga kana tirsan machadka FOI.
– Howshan maalgashiga Shiinaha waa mid aad ugu badan shirkadaha wershadaha iyo kuwa soo saara mashiinada, shirkadaha farsamada dawooyinka, kuwa macluumaadka iyo qalabka korontada ku shaqeeya, marka dhammaan waa wax ay xiiseeneyso dowladda Shiinaha, ayuu yiri baaraha.
FOI ayaa baaritaan ku sammeysay 51 shirkadood oo laga leeyahay Sweden kuwaasi oo ay iibsadeen shirkaddo Shiinees ah ama shaqsiyaad u dhashay dalka Shiinaha. Inta badan shirkaddahan ayaa la iibsaday saddexdii sano ee ugu dambeysay. Labo ka mid ah shirkadaha ay maanta maamulaqan milkiilayaal u dhashay dalka Shiinaha ayaa ah, shirkadda shineemooyinka ee SF Bio iyo shirkadda hoteelada ee Radisson.
Milkiilayaal Shiinees ah ayaa sidoo kale saami ku leh qeybo yar oo ka mid ah shirkadaha Spotify iyo Volvo.
Balse arrinka xiisaha leh ayaa waxa uu yahay sida uu sheegayo Jerker Hellström, kasbashada Shiineesku ku hayo shirkadaha farsamada warshadaha iyo kuwa cullunta biokemi – oo labaduba ah bartilmaameed ay xiiseeneyso dowladda Shiinaha oo qeyb ah qorshaha horumarineed ee u dagsan dowladda Shiinaha, waxuuna leeyahay khabiirka waa arrin aan lagu buraaragsaneen in Shiinuhu ay la wareegayaan qeybahaasi.
– Hal arrin oo inaga yaabiyay ayaa ah waxaa jira shirkado yar yar oo aad u fara badan oo leh xiiso tiknoolijiyad oo aan hore loogu baraarugin, waana shirkado yar yar, sida uu sheegay Jerker Hellström.
Baaritaanka FOI ayaa kii ugu horreeyay ee ceynkiisa ah waxaana u dhiibtay machadka wasaaradda arrimaha dibedda. Waa tallaabo si taxadar ah loogu eegayo maalgashiga Shiinaha ee qaaradda Yurub. Balse ujeedka ma ahan mid lagu faquuqayo maalgashiga Shiinaha, sida uu leeyahay Jerker Hellström.
– Ujeedka aan u eegnay maalgashiga Shiinaha waxa uu yahay, waa mid aad u badan oo soo jiitay indhaha, mana ahan waxa Sweden keliya quseeya ee waa guud ahaan Yurub iyo adduunka. Waa muran ah kama imaanayo in maalgashigooda baaritaan lagu sammeeyo. Waxaan umaleynayaa in muranka ka imaan doono in aan xilli hore lagu sammeeyn baaritaan, ayuu yiri Jerker Hellström.